Ikpere m na-ewe m iwe
Ikpere m na-ada ụda mgbe m gbanwere ya ma dozie ya Ihe karịrị 25% nke ndị toworo eto na-ata ahụhụ site na mgbu ikpere. Ikpere anyị na-ata ahụhụ nke ukwuu n'ihi ọrụ anyị na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-arịa mgbu ikpere, ikekwe ị chọpụtala na ikpere gị na-afụ ụfụ mgbe ị na-ehulata ma na-agbatị ya. Lelee ma ...
Gịnị Mere Mgbu Ji Arụ M Aka?
Gịnị Mere Mgbu Ji Arụ M Aka? Igbu ikpere bụ ọnọdụ nkịtị n'etiti ndị nọ n'ọgbọ niile. O nwere ike ịbụ nsonaazụ nke trauma ma ọ bụ mmerụ ahụ, ma ọ bụ ọnọdụ ahụike nke na-akpata mgbu ikpere na-adịghị ala ala. Ọtụtụ ndị na-enwe ihe mgbu na-ajụ ihe kpatara ikpere m ji egbu m mgbe m na-eje ije? ma ọ bụ gịnị mere ikpere m ji afụ ụfụ mgbe ...
Ọrụ nke nchebe n'úkwù
Gini bu ncheta ukwu? Is gini bu nchedo ukwu? A na-eji nchebe n'úkwù, dị ka aha ya na-egosi, iji chebe ukwu n'úkwù. A na-akpọkwa nchedo n'úkwù n'úkwù na n'úkwù. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ndị na-anọkarị otu ebe na ndị ọrụ ogologo oge ...
Abụba Afọ nwekwara ike ịbụ Bad maka Brain gị
Ọ dịla anya echere abụba dị n'ime afọ ka ọ bụrụ ihe ọjọọ karịa obi gị, mana ugbu a, nyocha ọhụụ na-agbakwunyekwu ihe akaebe na echiche ahụ na ọ nwekwara ike bụrụ ihe ọjọọ na ụbụrụ gị. Ọmụmụ ihe ahụ, sitere na United Kingdom, chọpụtara na ndị buru oke ibu ma nwee oke olu-ruo-hip (ụfọdụ abụba afọ) ejirila sl ...
Otu esi eyi ihe nkpuchi na COVID-19
Gbaa mbọ hụ na ihe nkpuchi ahụ na-ekpuchi imi na ọnụ nje virus COVID na-agbasa site na ụmụ irighiri mmiri; ọ na-agbasa mgbe anyị kpịrị ụkwara ma ọ bụ zee ma ọ bụ ọbụlagodi ikwu okwu. A na-ebutefe onye mmiri si n'aka onye ọzọ, Dr. Alison Haddock, ya na Baylor College of Medicine. Dr. Haddock na-ekwu na ọ na-ahụ mmeghe nkpuchi. K ...
Uru 7 nke of Du mmiri na afo efu nke ututu
1. Mee ka ọmụmụ ihe gị ka mma gosiri na mmiri ọ drinkingụ onụ na afo efu nwere ike inye aka mee ka ọnụọgụ metabolic dị elu site na 30%. Nke a pụtara na ọnụọgụ calorie na-abawanye site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ. Know maara ihe nke ahụ pụtara ziri ezi? - Ọsọ ọsọ ọsọ! Ọ bụrụ na gị metabolic ọnụego ...